NIN MUSLIM AH OO AFGEMBI KA SAMEEYAY DAL REER GALBEED AH | Saxil News Network
NIN MUSLIM AH OO AFGEMBI KA SAMEEYAY DAL REER GALBEED AH
Waligaa ma maqashay nin Muslim ah oo afgembi ka sameeyay dal reer Galbeed ah?, hagaag, waa dhacdo taariikhda gashay.
Abuu Bakar waxa uu horey uga mid ahaan jiray ciidanka booliiska, wuxuuna ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay oo qaatay diinta Islaamka ee dalka Trinidad sannadkii 1969-kii ka dib markii wadaad Masaari ah uu booqday jasiiradda ku taala qaaradda Amerika.
Abuu Bakar ayaa ka irdhoobay diinta masiixiga maadaama dadkii gumeystay dalkaas ay haysteen diintaas.
Sannadkii 1970-kii wixii ka dambeeyay ayuu dhawr sanno ku qaatay dalka Liibiya, halkaas oo uu marti u ahaa hoggaamiyihii dalkaas Mucamar Al Qadaafi oo xiligaas abaabuli jiray kooxaha muslimiinta iyo sidii diinta ay ugu faafin lahaayeen daafaha adduunka.
Markii uu Yasin Abu Bakr afgambiga sameeyay sannadkii 1990kii
Markii uu ku laabtay dalka Trinidad, waxa uu asaasay ururkiisa Jamaacatul Islaam, kaas oo dagaal la galay kooxaha maandooriyaha, iyaga oo galay xaafado ay ciidamada ka baqi jireen in ay hawlgalo ka sameeyaan.
Balse hawshii ay halkaas ka qabteen waxaa aad u dhibsaday dowladda oo u aragtay in dowlad kale laga garab dhisay.
Waxa ay dowladda qorsheysay in ay burburiso kooxdan, balse kooxda Abuu Bakar ayaa go’aan ku gaaray in dowladda oo dhan ay afgambiyaan ka hor inta aysan tallaabo ka qaadin.
Sannadkii 1990-kii isaga iyo 100 qof oo hubeysan ayaa xoog ku galay baarlamaanka dalkaas, waxa ay afduub ku qabsadeen Ra’isulwasaarihii, waxayna ku dhawaaqeen in ay afgembiyeen dowladda.
Waa isku daygii afgembi ee kaliya ee taariikhda la ogyahay ee ka dhacay dal reer galbeed ah.
Lix maalmood kadib oo lagu hareeraysnaa ayuu Abuu Bakar is dhiibay kadib markii loo fidiyay cafis iyo 2 sanno oo xabsi ah.
Wixii markaas ka dambeeyay waxa uu qaaday dhabaha siyaasadda nabdoon.
Dhowaan waxaa jiray welwel laga muujiyay illaa 100 qof oo dalkan u dhashay oo aaday dhanka Daacish si ay uga soo barbar dagaalamaan.
“Waxaan u sheegnay jameecadeena in aysan halkaas aadin, arrimaha Daacish ku saabsan oo dhan waa kuwa micno darro ah” ayuu yidhi Abuu Bakar.
Balse walwelkiisa ugu badan ma ahan dagaalka Suuriya, ee waa kan ka socda waddooyinka Trinidad. Sannadkii lasoo dhaafay oo kaliya 500 qof ayaa lagu dilay halkaas arrimo la xiriira dambiyo.
Dhibka ka jira dalkaas uma arkaan in uu yahay mid faqrinimada ay keentay, balse waxa ay u arkaan mid ku yimid burburka qoyska, asluub xumada iyo hab nololeedka ku dhisan dambiyada.
“Dadka waxa ay rabaan halyeeyo ay ku daydaan, halkii halyeeyo looga dhigi lahaa heesaayo iyo muusig aanan micno lahayn” ayuu yiri David Mailard oo ka tirsan xisbiga Jamaacatul Islaam.
Dalkan waa mid aad u qurux badan, kaas oo aragtida koowaad aad ku sirmaysid, balse waxa hoos yaala dhibaato aan lasoo koobi Karin.